Raha tsiahivina, niandoha tamin’ny fikasan’ny METM foibe hanolo amboletra ny pasitera etsy Antohomadinika, Alain de Neri Andrianantenaina, ny korontana. Tsy ireo mpivavaka ihany anefa no nahazo tombontsoa tamin’ny pasitera fa hatramin’ireo fokonolona, hoy izy ireo. Ny andininy faha-73 amin’ny fitsipika anatiny mifehy ny METM dia milaza fa rehefa mihoatra ny 80 isa ireo mpandray fanasan’ny Tompo ao amin’ny fiangonana dia tsy tokony ho anjaran’ny foibe ny manala ny mpitandrina. Amin’ny alalan’ny tsangan-tanana no anapahana hevitra, hoy ny andininy faha-40. Mbola manohy ny fotoam-pivavahany ihany moa ireto Kristianin’ny METM tetsy Antohomadinika ireto raha ny fampitam-baovao na dia nakatona aza ny fiangonana. Ny 7 mey izaho kosa no hiverina hiakatra fitsarana indray ny raharaha.